iPad Pro dia mamela keyboard vaovao vaovao feno kokoa. Vaovao IPhone
Ny tabilao virtoaly an'i Apple dia nanao dingana lehibe tamin'ny fahatongavan'ny iPad Pro vaovao. Ahitana tsipika manokana ho an'ny isa sy ny endri-tsoratra manokana, ary koa ny bokotra ho an'ny hidin-doha, ny lakilen'ny kiheba ary ny maro hafa. Endrika vaovao mamorona ny ankamaroan'ny efijery 12.9-inch anao.
Ny endriny feno an'ny klavier vaovao ampiharina ao amin'ny iPad Pro vaovao dia mitovy kokoa amin'ny tabilao birao mahazatra, izay azo ampiasaina miaraka amin'ny iPad amin'ny toerana misy azy sy ny toerana misy azy. Ary koa, toy ny amin'ny klavier mahazatra, raha tsindrio ny bokotra fanovana sy isa iray dia hiseho ilay marika eo amboniny; Raha tazonintsika ny lakile, tsy omentsika ilay fiovana teo aloha, dia hiseho ihany koa ny safidy hisafidianana ilay marika, toy ny nitranga hatramin'izao. Ao amin'ity kitendry vaovao ity dia misy ihany koa fanalahidy manokana ho an'ireto tandindona manaraka ireto: miampy, mihena, mitovy, tsipika mitsangana, mihemotra, fononteny, kôlônika, semicolon, apostrophe ... ary marika hafa izay hitantsika amin'ny kitendry fizika.
Ny kitendry dia misy rafitra iray manakana ny bokotra Caps Lock vaovao tsy ho voatetika tsy nahy. Izy io dia ao anatin'izany ny mpampiasa dia tsy maintsy manindry sy mitazona io bokotra io mandritra ny fotoana fohy hamelomana azy, noho izany ny fanindriana azy io dia tsy hampihetsika azy. Amin'ny alàlan'ny fanovana kitendry mankany amin'ny maody isa sy marika, dia aseho ireo marika maro hafa Tafiditra ao koa ny safidy hanafoanana ny kitendry ary hamerenana.
Etsy ankilany, na dia midika fanatsarana lehibe kokoa noho ny ampiasaina amin'ny maodely iPad na iPhone hafa aza ity fitendry ity, dia misy fahavoazana lehibe. Hita fa ny safidy hizara ny keyboard dia tsy hiasa amin'ny iPad Pro intsony, zavatra tena tian'ny mpampiasa fa tsy maintsy ekena fa nanapa-kevitra ny hanova azy io i Apple ho kitendry feno kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » iPad Pro dia mamela keyboard vaovao vaovao feno kokoa